Grab Takes Strides Towards Delivering its Promise of Being Myanmar’s Everyday, Everything Super App
Yangon, Myanmar, 11 February 2020 – Grab, the leading super app in Myanmar and Southeast Asia, continued its growth momentum in 2019 by delivering on its plans to improve lives and provide value-added services to Myanmar and its people. Grab’s long-term investment in Myanmar has put the building blocks in place to bring positive impact to different communities. More and more users are enjoying access to various services in the Grab App from transportation to food deliveries, while Grab’s driver-partners, delivery-partners and food merchant-partners are enjoying greater income opportunities.
Since 2017, Grab has brought its innovation, expertise and investment to Myanmar to support the transformation of the country’s transportation sector. In 2019, Grab continued its efforts to bring positive impact to the daily lives of passengers and driver-partners with new services such as GrabTaxiCall to provide live assisted bookings for GrabTaxi rides and Premium Rentals (Beta),apremium, on-demand and flexible service allowing businesspeople, tourists and families to book 7-seater minivans and 4-seater sedans for hourly and daily use.
A number of innovative in-app features were also introduced for users, including the new-look GrabRewards and Hotels, allowing Grab users to make bookings of hotel and accommodation during their trips within and outside of Myanmar. For driver-partners, Grab launched the Instant Cash Out feature to facilitate instantaneous withdrawal of earnings and easier payment of online transactions. The compulsory Passenger Selfie Verification policy for new Grab users was also launched to ensure higher safety and security standards on the platform.
Another significant milestone for Grab was the launch of food delivery service GrabFood in November 2019. GrabFood empowers people in Yangon to beat hunger anytime. Today, students stuck working onaproject at school, professionals slugging it throughaworking lunch, even parents tending to their children can now satisfy their hunger, with each food delivery arriving at an average of 30 minutes. GrabFood aims to be the leading food delivery player in Myanmar in terms of order volume, having the widest selection of merchants and fastest delivery time.
“Grab is constantly trying to elevate the quality of life for people in Myanmar and we will continue our efforts to generate positive outcomes for various communities. 2019 wasamemorable year for us as we diversified our services. As Myanmar’s everyday, everything super app, we have added food deliveries, hotel bookings within the Grab App and rentals of premium vehicles to our other transportation services. To drive Myanmar forward and strengthen our position as the everyday, everything super app, we will maintain our focus on service quality and safety standards and to expand our ecosystem through investment in technology, platform enhancements and forging more partnerships,” said Cindy Toh, Country Head, Grab Myanmar.
Grab’s milestones of 2019 have empowered users, partners and the business community by enabling access to everyday services in one super app. Here are some of Grab Myanmar’s highlights of 2019 in numbers: (Please refer to infographic attached separately for more details)
Grab’s growth in transport services:
Growing trend in ride-hailing with 10% increase in daily bookings in 2019 compared to 2018
97 million kilometres in distance travelled via Grab in Yangon in 2019
Improvements in map usage with 600% increase in Points of Interest (POI) to 196,000 by end-December 2019
Most popular destinations: Myanmar Plaza, Junction City, Yangon International Airport
Improved service standards with doubling of Platinum and Gold driver-partners
Growth of GrabFood since it was launched two months ago:
Average delivery time of 30 minutes
Most ordered items: Local Favourites, Fried Chicken, Bubble Tea
Average of more than 2,100 GrabRewards redemptions per day in 2019
20% growth in active GrabRewards users in 2019
Most popular redemptions: Mobile top-ups, discounts at food merchants, movie tickets
Contribution to the business community with Grab For Business
Doubled the number of Grab for Business partner organisations in 2019
200% increase in Grab for Business bookings in 2019 compared to 2018
More than 30,000 registered Grab for Business users
In the past year, Grab has also formed numerous partnerships to offer new in-app features, to bring benefits to driver-partners, to bring unique experiences to users, to support special causes and encourage road safety. They include:
Myanma Insurance: Personal Accident Insurance coverage for driver-partners and passengers on every trip, with claims processed by Myanma Insurance.
Tuborg and Kirin Ichiban: Educational campaigns to promote responsible drinking with beer brands Tuborg and Kirin Ichiban.
Disney: Grab hostedamovie screening of Marvel Studios’ Avengers: Endgame at Mingalar Cinemas and gave away thousands of movie tickets through GrabRewards.
UnionPay, JCB, VISA: Credit and debit card holders users can save more with cashless payments for rides booked through the Grab App.
Agoda and Booking.com: New in-app feature named Hotels, allow users to book hotels and other accommodation from Agoda and Booking.com without having to leave the Grab App.
Denko: 5,000 co-branded Grab Denko Smile Cards were issued to driver-partners to enjoy petrol rebates.
Samaritan’s Purse: Partnership formed to launch anti-human trafficking awareness campaign and workshops for driver-partners.
Grab will continue its momentum in the coming year to expand its services to other cities, improve the quality of transportation services, and to support different communities.
Launch of GrabFood in Mandalay: Grab will bring GrabFood, its online food delivery service, to Mandalay in 2020 to create more income opportunities for local restaurants and delivery-partners.
Expansion of Premium Rentals service: Grab’s Premium Rentals [Beta] on-demand and flexible service allows passengers to rent premium 7-seater and 4-seater vehicles for hourly and daily use, with multiple stops possible. This service will be expanded to other cities and to offeravariety of flexible packages that suit the everyday needs of families, businesspeople, employees, and regular commuters.
Improving transportation service standards: In 2019, Grab implemented an innovative automated Quality Framework system which assesses the performance of driver-partners based on the trip ratings and feedback provided by users. Grab will utilise this system to encourage users to share feedback about their trips, so as to ensure the highest service standards and customer satisfaction.
Grab For Good initiatives: Grab will introduceanumber of initiatives under its Grab for Good ethos such as using technology on the Grab platform to improve accessibility and provide essential services for the disadvantaged and underserved. More updates about the Grab For Good initiatives in Myanmar will be shared in the near future.
For more information about Grab Myanmar, visit www.grab.com or www.facebook.com/GrabMM.
Social Impact & SafetyOthers
Grab က ၂၀၂၀ အတွင်း GrabFood နှင့် GrabMart ပေါ်ရှိ စားသုံးသူနှင့် အစားအသောက်ပို့ဆောင်သူများအကြား ကောင်းမွန်သည့် အကျိုးကျေးဇူးများ ပေးအပ်ခဲ့သည့် မိတ်ဖက်ဆိုင်လုပ်ငန်းများအား ရွေးချယ်ဆုပေးအပ် ရန်ကုန်၊ မြန်မာ၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ […]
BusinessSocial Impact & SafetyOthers
Grab သည် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ် စီးပွားရေးစနစ် ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ရေး တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ပြီး SMEs နှင့် တစ်နိုင်တစ်ပိုင် လုပ်ငန်းငယ်များအတွက် ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိ
● မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ကိုဗစ်-၁၉ စီးပွားရေးထိခိုက်မှု သက်သာရေးစီမံချက်နှင့်အညီ ကပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေသည့်ကာလအတွင်း Grab က မိတ်ဖက်အရောင်းဆိုင်များ ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအတွက် ပံ့ပိုးကူညီလျက်ရှိ ● ၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လမှ နိုဝင်ဘာလအတွင်း GrabFood ၏ နေ့စဉ် ပျှမ်းမျှ အော်ဒါအရေအတွက် (၄၇၀%) နီးပါး မြင့်တက်ခဲ့ပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ပလက်ဖောင်းကို အသုံးပြုသည့် မိတ်ဖက်အရောင်းဆိုင် အရေအတွက် (၈၀%) အထိ တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ရန်ကုန်၊ မြန်မာ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့ – အရှေ့တောင်အာရှ၏ ထိပ်တန်း နေ့စဉ်သုံး Everyday Everything App တစ်ခုဖြစ်သော Grab သည် မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ကိုဗစ်-၁၉ စီးပွားရေးထိခိုက်မှု သက်သာရေးစီမံချက် (CERP) နှင့်အညီ ကိုဗစ်-၁၉ ဖြစ်ပွားနေသည့်ကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ် စီးပွားရေးစနစ် ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များကို ယနေ့ ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မတ်လမှ နိုဝင်ဘာလအတွင်း ရရှိခဲ့သော ရလဒ်များမှာ ယခုကဲ့သို့ စိန်ခေါ်မှုများ ပြည့်နှက်နေသည့် ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း မိုဘိုင်းနည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ ၎င်း၏ပလက်ဖောင်းမှတစ်ဆင့် customer များအား ဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ပုံများနှင့် ပြည်တွင်းရှိ မိတ်ဖက်အရောင်းဆိုင်များ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အထောက်အပံ့ပေးအပ်ခဲ့ပုံများကို ထင်ဟပ်ပြသနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံအတွင်းရှိ နေရာအနှံ့အပြားတွင် ခရီးသွားလာခြင်းကို တားမြစ်ထားပြီး မိမိတို့ နေအိမ်တွင်သာ နေထိုင်ကြရန် အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားခြင်းကြောင့် စားသုံးသူများအတွက် GrabFood ကို အသုံးပြုပြီး အစားအသောက်များ မှာယူနိုင်ရန်နှင့် GrabMart အသုံးပြုပြီး နေ့စဉ် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူနိုင်ရန် လုခြုံစိတ်ချစွာဖြင့် အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်သော ပလက်ဖောင်းတစ်ခုကို Grab က ပံ့ပိုးလည်ပတ်လျက် ရှိပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ကိုဗစ်-၁၉ ၏ ရိုက်ခတ်မှုကြောင့် သက်ရောက်မှု ရှိခဲ့သည့် လုပ်ငန်းရှင်များ၏ ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ပံ့ပိုးပေးလျက် ရှိပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မတ်လမှ နိုဝင်ဘာလအတွင်း Grab ၏ ဝန်ဆောင်မှု အမျိုးအစား အားလုံးတွင် သန်းနှင့်ချီသော မှာယူအသုံးပြုမှုများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ အရေအတွက်မှာ ကပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေသည့် ကာလအတွင်း စားသုံးသူများ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးစနစ် ပြောင်းလဲအသုံးပြုမှုကြောင့် တိုးတက်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် Grab အက်ပလီကေးရှင်း စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှ အစပြု၍ အသုံးပြုမှုနှုန်း သိသိသာသာ တိုးတက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း ထင်ဟပ်စေပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် Grab အက်ပလီကေးရှင်းအတွင်း ပြုလုပ်ခဲ့သည့် လစဉ် မှာယူအသုံးပြုမှု အရေအတွက်မှာ (၂၅%) အထိ တိုးတက်လာခဲ့ပါသည်။ “Grab ကနေ ကပ်ရောဂါဖြစ်နေတဲ့ ကာလအတွင်းမှာ တိုးပွားလာတဲ့ customer တွေအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ အစားအသောက်နဲ့ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ပေးအပ်နေခဲ့တာပါ။ ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေးမြို့မှာ GrabFood နဲ့ GrabMart ဝန်ဆောင်မှုတွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် တိုးချဲ့နိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်မတို့မှာ ရှိထားပြီးသား နည်းပညာ၊ ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကွန်ရက်နဲ့ စနစ်ကျတဲ့ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုပုံစံတွေကို အသုံးချခဲ့ပြီးတော့ လစဉ် ပုံမှန်အသုံးပြုသူအရေအတွက်က တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ကိန်းဂဏန်း နှစ်နေရာစာ တိုးပွားလာနေပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက် စားသုံးသူ အများစုအနေနဲ့ အပြင်မှာဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်တွေအထိ သွားဝယ်စားဖို့ အဆင်မပြေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မတို့ရဲ့ မိတ်ဖက်အရောင်းဆိုင်တွေအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်ကနေ ဝင်ငွေလမ်းကြောင်း ဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး သူတို့ ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်ရေးမှာ တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ထောက်ပံ့ကူညီပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်” ဟု Grab Myanmar ၏ Country Head ဖြစ်သူ Cindy Toh က ပြောသည်။ GrabFood က စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းများ ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ် ကူးပြောင်းနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မတ်လမှ နိုဝင်ဘာလအတွင်း GrabFood ဝန်ဆောင်မှု၏ နေ့စဉ် အော်ဒါမှာယူမှု ပမာဏမှာ (၄၇၀%)နီးပါး အထိ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် customers များကို ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် ပလက်ဖောင်း အသုံးပြုထားသည့် GrabFood မိတ်ဖက်စားသောက်ဆိုင် အရေအတွက် (၈၀%) အထိ တိုးတက်လာခဲ့ပြီး ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့များတွင် GrabFood ဝန်ဆောင်မှုအား ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနေသော လိုင်စင်ရ စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း စုစုပေါင်း (၁,၅၀၀) ကျော်အထိ ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ဖြစ်ပွားနေသည့် ကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူဦးရေအများဆုံး မြို့ကြီး (၂) မြို့ရှိ စားသုံးသူ အများအပြားမှာ ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးစနစ်ကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုလာကြပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မတ်လမှ နိုဝင်ဘာလ အတွင်း လစဉ် GrabFood အသုံးပြုသူ စုစုပေါင်း၏ (၇၅%) မှာ ဝန်ဆောင်မှုကို ပထမဦးဆုံးအကြိမ် အသုံးပြုသူများ ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နေ့စဉ်သုံး Everyday Everything App တစ်ခုဖြစ်လာရန်ဆိုသည့် Grab ၏ မျှော်မှန်းချက်အတွက် ရရှိခဲ့သော အောင်မြင်မှုတစ်ခုမှာ Grab အား သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် အသုံးပြုနေသည့် customers များ၏ (၅၂%) သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မတ်လမှ နိုဝင်ဘာလအတွင်း လစဉ် GrabFood ဝန်ဆောင်မှုကို စမ်းသပ်အသုံးပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေသည့် ကာလအတွင်း လက်လီအရောင်းဆိုင်များအတွက် အရေးပါသော ပံ့ပိုးမှုများ ပေးအပ်ခဲ့သည့် GrabMart GrabMart သည် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း စားသုံးသူများအတွက် နေ့စဉ်မရှိမဖြစ် လိုအပ်သည့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ရန် စတင်ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ ရန်ကုန်မြို့ရှိ အရောင်းဆိုင် (၂၀၀) ကျော်မှ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ၊ အသင့်စား စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အလှအပရေးရာ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ၊ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ စသည့် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားပေါင်း များစွာကို GrabMart တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မတ်လမှ နိုဝင်ဘာလအတွင်း GrabMart ၏ နေ့စဉ် ပျှမ်းမျှအော်ဒါ ပမာဏမှာ (၂၇) ဆ အထိ မြင့်တက်လာခဲ့ပြီး အဆိုပါ ပမာဏအတွင်း GrabMart ဈေးဝယ်ယူသူ အသစ်များထံမှ အော်ဒါများမှာ (၇၀%) ပါရှိသောကြောင့် ဝန်ဆောင်မှုအသစ်အား သိသိသာသာ ရယူအသုံးပြုလျက်ရှိနေကြောင်း တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ […]
BusinessSocial Impact & SafetyConsumers & Drivers
မြန်မာနိုင်ငံတွင် GrabFood ဝန်ဆောင်မှု တစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်နှင့်အတူစားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းများကိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေပြီးလူမှုဘဝများ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေမည်ဟူသော ကတိကဝတ်ကို ထပ်မံအတည်ပြု
ရန်ကုန်၊ မြန်မာ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့ – လွန်ခဲ့သည့် တစ်နှစ်က အရှေ့တောင်အာရှ၏ ထိပ်တန်း everyday everything app တစ်ခုဖြစ်သော Grab သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ စားသုံးသူများအတွက် မိမိတို့နှစ်သက်ရာ စားသောက်ဖွယ်ရာများကို ရှေ့အရောက် ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ရန် GrabFood ဝန်ဆောင်မှုကို စတင် မိတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။ […]